Ukulawula Komzali nge-TimeAway kumadivayisi we-Android | Izindaba zamagajethi
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele siqiniseke izinyathelo zokuphepha ngaphambi kokunikeza abancane idivayisi yeselula ye-Android, okuthile okwenziwa abazali abanomthwalo wemfanelo abavame ukukwenza abakhathazekile ngalokho abazokubona kubo, uma sekwethunyelwe kubo ngesikhathi esithile.
Njengoba zikhona izinsiza ezithile ze-iPad, lapho unikeza ukuphepha ocingweni ngaphambi kokulethwa kwabancane, isimo esifanayo kufanele siphakanyiswe kulabo abanohlelo lokusebenza lwe-Android. Njengamanje sizokhuluma ngokunye okuhle okuvela esandleni sohlelo, ongalulanda ku-Google Play Isitolo; Kuze kube manje kule ndatshana sizozinikela ekuzameni ukusho izizathu zokuthi kungani lolu hlelo lokusebenza kufanele lusetshenziswe, ngaso sonke isikhathi sigxile ezithakazelweni zethu nasekunakekelweni kwenhlalakahle yabancane.
Ukuphepha Kwezingane ngohlelo lokusebenza lwe-TimeAway Android
I-TimeAway isicelo samadivayisi eselula e-Android anenhloso eyinhloko yokunciphisa abancane, uhlobo lokuzulazula noma lokuhlola abazoba nalo kulawa makhompyutha. Yize uhlelo lokusebenza lukhululekile ngokuphelele, umsebenzisi kufanele abhalise idatha yakho ku-akhawunti yabathuthukisi bayo ukuze akwazi ukulandelela imisebenzi ngayinye ezokwenziwa kuyo. Ngokungangabazeki, ulusizo olukhulu, ngoba ubaba uzoba nokwenzeka ukude ukhiye noma uvule umakhalekhukhwini lapho uncoma uhlobo oluthile lomsebenzi osolisayo. Ngaphezu kwalokhu, kungenzeka futhi ukuthola indawo lapho abancane benalawa madivayisi eselula, lokhu kungaba esinye sezici ezibaluleke kakhulu ukugqamisa, uma kwenzeka ukuthi ithuluzi lifakwe komakhalekhukhwini kanye nezingane ungumnikazi wazo, yintsha esakhula.
Lapho sesithengile lolu hlelo futhi salufaka kudivayisi yethu yeselula, kuzofanele sivule i-akhawunti yamahhala ngeTimeAway kusuka kwikhompyutha efanayo nangethuluzi elisebenzayo; izimvume okufanele sizinikeze yilezo ezijwayelekileOkungukuthi, sizogunyaza lolu hlelo lokusebenza lwe-Android ukuze sikwazi ukulawula ukusebenza okuthile kude kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwenye.
Ngenxa yalesi sici, esibaluleke kunazo zonke, ukufakwa kwesicelo kanye nokubhaliswa kuzodingeka kwenziwe kuwo womabili amatheminali, okuzobasiza ukuthi bahlale bexhunyaniswa njalo.
Ngesikhathi sokubhalisa ngalolu hlelo lokusebenza lwe-Android, umsebenzisi (ozoba ngumzali futhi ozosebenza njengomlawuli) kufanele setha iphasiwedi enamadijithi ama-5, ikhodi ezovimba yonke leyo misebenzi esibona kulula ukuyenza, kuselula encane kunazo zonke.
Ngenxa yalesi silinganiso sokuphepha, izingane ngeke ube namandla okukhipha uhlelo, Isikhathi abafisa ukwenza ngaso, bazocelwa ukuthi bafake ikhodi enamadijithi ama-5 ebesiphakamise ukuthi siyilungiselele ngaphambilini.
Isimo esithandeka kakhulu sisasesilawulikude sokusetshenziswa kweselula yabancane. Abazali kuzofanele bangene kuphela ukufaka iselula yabo futhi setha amahora athile ukuze izingane zakho zixoxe noma upheqa ingosi ye-YouTube (njengesibonelo esincane salokhu kulawula).
I-TimeAway njengoba uhlelo lokusebenza lwe-Android luhlangana neGoogle Maps, lokhu kungenye inzuzo ehlukile ngoba nayo, sizoba nethuba lokuthola abancane kunoma iyiphi indawo lapho bekhona, inqobo nje uma bephethe iselula yabo.
Ekupheleni kosuku, abazali bangafika ku- buyekeza umbiko omncane ngakho konke okwenziwe izingane zakho namadivayisi wabo weselula, angahle alawule kangcono noma akhawulele eminye yale misebenzi; Yize uhlelo lokusebenza lungalandwa futhi lufakwe ngokuphelele mahhala kumadivayisi wakho we-Android, unjiniyela uphakamise inguqulo ye-premium ngentengo enengqondo, lapho kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa njenge- «Android Parental Control».
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayinikeza kanjani ngokuphepha idivayisi ye-Android kwabancane
Ungakhulisa kanjani usayizi wezithombe ngosayizi ababekiwe ngaphambili ku-Windows?